आरा चिरेर गुजारा चलाउने दर्जीको हत्यापछि परिवारको बिचल्ली
२०७६ असोज १ बुधबार, घरको पिँढीमा छोराछोरीसँगै बसेकी दर्जीको आँखामा टिलपिल आँसु भरिन्छ । दर्जीलाई भेट्न तथा समावेदना प्रकट गर्न आउनेहरूलाई देखेर उनका आँखा झनै रसाउँछन् । दुई छोरा र तीन छोरीको बीचमा बसेकी सन्तकुमारीलाई श्रीमान्को मृत्युको पीडासँगै छोराछोरीको शिक्षादिक्षा, पालनपोषण, घरखर्च चलाउने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । भत्किन लागेको घर, बिहानबेलुकी दुई छाक हातमुख जोड्न धौधौ पर्ने परिवारलाई गाउँमा आरा मेसिन चलाएर गुजारा चलाइरहेका मोतिप्रसादको हत्याले परिवारको बिचल्ली भएको छ । ... बाँकी अंश»
अरनिको राजमार्गमा विभिन्न ठाउँ ठप्प
२०७६ असोज १ बुधबार, बनेपा । अविरल वर्षाका कारण अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पाँचखाल नगरपालिकाको ५४ किलो र भुम्लु गाउँपालिकाको दोलालघाट बजार आसपासमा पहिराले यातायात ठप्प भएको छ । ... बाँकी अंश»
अरुण नदीमा जिप खसेर छ जना बेपत्ता
२०७६ असोज १ बुधबार, सङ्खुवासभा । जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट बिरामी बोकेर धरान जाँदै गरेको जिप मंगलबार राति १०ः३० बजे दुर्घटना हुँदा कम्तीमा छ जना बेपत्ता भएका छन् । ... बाँकी अंश»
एक बसले अर्को बसलाई दियो ठक्कर, बाह्र घाइते
२०७६ असोज १ बुधबार, उक्त बसमा २९ यात्रु सवार रहेका थिए । नेपालगञ्जको बसमा सवार यात्रु भने सकुशल रहेका प्रहरीले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
हैरानै पार्यो छाडा पशुको समस्याले, थालियो गणना
२०७६ असोज १ बुधबार, बुलबुले । सुर्खेतमा रहेका छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्न गणना शुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको कार्यदलले सुर्खेतमा मङ्गलबारदेखि छाडा पशुको गणना शुरु गरेको हो । ... बाँकी अंश»
असोज १३ मा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने बहानामा जवरजस्ती घोषित भयो कपिलवस्तु
२०७६ असोज १ बुधबार, कपिलवस्तु । प्रदेश नं ५ मा बाँकी रहेको कपिलवस्तु जिल्लालाई एक समारोहका साथ सदरमुकाम तौलिहवामा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
शिमलाबाट उद्धार गरिएका बालकलाई दोस्रो बिहे गरेकी आमाको जिम्मा लगाइयो
२०७६ असोज १ बुधबार, तुलसीपुर । एक साताअघि भारतको शिमला स्थित पुर्जाली गाउँबाट उद्धार गरिएका दाङ तुलसीपुर १८ का बालक विशाल चौधरीलाई उनका आफन्त समक्ष मंगलबार हस्तान्तरण गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असोज १ बुधबार, भद्रपुर । झापाका विभिन्न स्थानमा बम विष्फोट गराई आतङ्क मच्चाएको आरोपमा पक्राउ परेका नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज प्रमुख र सेक्रेटरीसहित पाँच जनालाई पाँच कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । ... बाँकी अंश»
बस दुर्घटनामा एकको मृत्यु, पाँच घाइते, टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, खलङ्गा । कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका–१, नाग्ममा बस दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जुम्लाको सिञ्जाबाट सदरमुकाम आउँदै गरेको ना१ख ७६६४ नंको बस दुर्घटना हुदाँ एक जनाको मृत्यु भएको हो । ... बाँकी अंश»
आकस्मिक अवतरण गरिएको सिम्रिक एयर र मनाङ एयरको हेलिकोप्टर
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिका– ३ धोडखोलाको दिलमा मंगलबार बिहान करीब ८ बजे आकस्मिक अवतरण गरिएको सिम्रिक एयर र मनाङ एयरको हेलिकोप्टर । ... बाँकी अंश»
स्वास्थ्य संस्थाको सोलार वडाध्यक्षको घरमा
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, ओखलढुंगा । सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्षले स्वास्थ्यसंस्थाको सोलार लगेर आफ्नो घरमा प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यचौकी बलखुमा प्रयोगमा भैरहेको २ सय वाट क्षमताको सोलार वडाध्यक्ष दीपहरी राईले घरमा लगेर प्रयोग गरेका हुन् । विगत २ महिनादेखि सरकारी सम्त्ति अध्यक्षले आफ्नो घरमा प्रयोग गरेको विषयमा व्यवस्थापन समिति लगायत सम्बन्धित निकाय मौन छ । ... बाँकी अंश»
गाउँपालिका कार्यालय तोडफोडको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ, ४५ विरुद्ध उजुरी
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोडको आरोपमा उनीहसहित अन्य ४५ विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराइएको गाउँपालिका कार्यवाहक प्रमुख कृष्णकुमारी दवाडीले बताइन् । ... बाँकी अंश»
सत्तारुढ नेकपाको मजदुर संघमाथि ट्रेड युनियन कांग्रेसको शानदार जित
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, पर्सा । वीरगन्जको हिमालयन डिष्टिलरी प्रालिको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा ट्रेड युनियन कांग्रेससंग आबद्ध नेपाल कारखाना श्रमिक संघले शानदार जित हासिल गरेको छ । ... बाँकी अंश»
महाकाली नदीमा हाम फालेर ३० वर्षे युवा बेपत्ता
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, दार्चुला । दार्चुलामा महाकाली नदीमा हाम फालेर एक जना बेपत्ता भएका छ्न् । ... बाँकी अंश»
बाह्र वर्ष अघि १४ जनाको ज्यान लिएको घटनाका पीडितले अझै न्याय पाएनन्, जाने कहाँ ?
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, कपिलवस्तु । नेपालको इतिहासमै कलङ्कका रुपमा रहेको कपिलवस्तु घटनाको १२ वर्ष बितेको छ । विसं २०६४ भदौ ३० गते कपिलवस्तुको कुदरबेटवाका तत्कालीन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय नेता अब्दुल मोइद खाँको अज्ञात समूहले हत्या गरेपछि भड्केको हिंसाका कारण १४ सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । ... बाँकी अंश»
आजित बने पर्यटकहरु मगन्तेदेखि, के सन्देश लिएर जालान् ?
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, चिप्लेढुङ्गा । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रोजाइको शहर पोखराको लेकसाइड भारतीय माग्नेहरुको अखडा बन्दै गइरहेको छ । ... बाँकी अंश»
गरिमा बैंकबाट खानेपानीलाई फिल्टर सहयोग
२०७६ भदौ ३० सोमबार, स्याङ्जा । बैंकहरु कमाउने मात्र होइन सामाजिक सहयोगमा पनि तल्लिन हुन्छन् भन्ने उदाहरण देखिन थालेको छ । यसको उदाहरण देखाउने बैंक हो गरिमा विकास बैंक । स्याङ्जाको वालिङबाट स्थापना भएको गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले वालिङ साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई फिल्टर सहयोग गरेर सामाजिक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । ... बाँकी अंश»
धनकुटाको ७ पालिका र जिल्लामा जागरण अभियान
२०७६ भदौ ३० सोमबार, धनकुटा । राष्टिय जागरण अभियानको दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनुसार धनकुटाका ७ वटा पालिका र जिल्ला सदरमुकाम धनकुटा बजारमा भव्य रुपमा कार्यक्रम गर्ने सोमबार नेपाली कांग्रेस धनकुटाले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
हिमाली जिल्ला मनाङमा अस्पताल निर्माणको योजनाकार थिए टेकबहादुर
२०७६ भदौ ३० सोमबार, मनाङ । हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा एक सुविधा सम्पन्न अस्पताल चीन सरकारले बनाईदिने भएपछि मनाङबासी गौरवान्वित बन्न पुगेका छन् । ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा चीन सरकारले उक्त अस्पताल बनाईदिन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मनाङबासीहरु खुशी देखिएका हुन् । ... बाँकी अंश»
जेलभित्रै राजनीतिः विप्लव समूहका राई जेलबाटै नेकपामा छिरेको सूचना आयो
२०७६ भदौ ३० सोमबार, फिक्कल । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहका जिल्ला सेक्रेटरी दिपेन राई जेलबाट नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन् । ... बाँकी अंश»